लौ हेर्नुस् – महिला महोत्सवको मंच सबै पुरुषै पुरुषले भरिएको, कार्यक्रम संचालकदेखि बक्ताहरु सबै पुरुष !
काठमाडौं, २३ चैत । चैत २१ देखि २३ सम्म ‘कीर्तिपुर वुमेन्स फेस्टिभल २०७५’ अर्थात् ‘कीर्तिपुर महिला महोत्सव–२०७५’को आयोजना गरिएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको २३ औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा ‘कीर्तिपुर महिला महोत्सव २०७५’ आयोजना गरिएको हो ।
कीर्तिपुरका महिलाहरुले उत्पादन गरेका विभिन्न सामाग्रीहरुको प्रर्दशनी गरेर महिलाहरुलाई उद्यममा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त महोत्सबमा पुरुषहरुको मात्रै सहभागिता देखिएपछि सामाजिक संजालमा चौतर्फी यसको आलोचना गरिएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको पुरानो बस्तीभित्र परेका वडा १, २, ३ व १० मा अओजना भइरहेको महोत्सव उद्घाटनमा एकजना महिला बाहेक सबै पुरुष देखिए । उपमेयर सरस्वती खड्का मात्रै मञ्चमा थिइन् । उनी नगरपालिकाको उपमेयर भएको कारण मञ्चमा थिइन् । तर, बाँकी सबै पुरुषहरु मात्रै थिए । उद्घाटनको कार्यक्रम सञ्चालनदेखि वत्ताहरु सबै पुरुष थिए ।
होत्सवमा हस्तकला, साना उद्योग प्रदर्शनी, खाना स्टल, साँस्कृतिक प्रदर्शनी, बाजागाजा प्रदर्शनी छ । सांस्कृति कार्यक्रम पनि महिलाहरुले नै देखाए । तर, मञ्चमा पुरुषहरु मात्रै देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा तिव्र आलोचना भएको हो ।
सञ्चारिका समूकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार निर्मला शर्माले यही तस्बिर राख्दै यसको आलोचना गरेकी छिन् । लेखेकी छिन्, ‘यसरी नै चलेको छ हाम्रो राज्य संरचना , यस्तै मन्चन टुलु टुलु हेर्नु बाहेक के छ बिकल्प ?’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट नेतृ उषाकिरण तिम्सिनाले उद्घाटनको तस्बिर राख्दै यसको बिरोध गर्दै लेखेकी छिन्, ‘आयोजकहरुले र यो मन्चमा बस्नेहरु सबैले अनुहारमा गोबर पोतेरै बस्नु भएको भए , ब्यानरमा लेखिएको कुरालाई व्यंग्य हुने थिएन ।’
पत्रकार टिका विष्टले पनि यही तस्बिर राख्दै लेखेकी छिन्, ‘हेर्न बाँकी यही थियो ।’ लेखिका सावित्री गौतमले लेखेकी छिन्, ‘महिला महोत्सव’मा उपस्थित’ महिलाका श्रीमान’हरु होलान् !
बारा र पर्सामामा आएको सामान्य आंधीहुरी नभएर ‘टोर्नाडो’ भएको नेपाल जल तथा माैसम विज्ञान विभागको पुष्टि, वैज्ञानिक अनुसन्धान नहुदा भयो ठुलो विनाश (विज्ञप्ति सहित)